के तपाइँको व्यवसाय ट्विटर मा हुनु पर्छ? | Martech Zone
के तपाइँको व्यवसाय ट्विटर मा हुनु पर्छ?
बुधबार, डिसेम्बर 14, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हालै, twitter एप्पलको ट्विटरको कडा आईएसओ एकीकरण छ भनेर खुलासा गरियो २itter% ले ट्वीटर साइनअप बढायो। धेरै वर्ष यसलाई बेवास्ता गरेपछि, म अन्ततः टुक्रिएँ र आईफोन पाएँ ... म पछि त्यसको बारेमा लेख्नेछु। म ट्विटरको साथ आईफोनमा कडा एकीकरण मन पराउँछु - मलाई लाग्छ कि म वास्तवमै ट्विटरको साथ फेरि प्रेममा फस्छु!
२०० 100 देखि १०० मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिहरू ट्विटरमा आएका छन्, कथा, अन्तर्दृष्टि, र बिरालो चित्रहरू साझा गर्दै। तर के ट्विटर वास्तवमै तपाईंको लागि हो?
फ्लोटाउन र स्तम्भ फाइभबाट यो जिब्रो-इन-गाल फ्लोचार्ट तपाईंको ट्विटरमा हुनुपर्दछ कि रोचक छ!
त्यसो भए ... उत्तर हो हो! तपाईं ट्विटर मा हुनु पर्छ।
टैग: व्यापार ट्विटरतपाईं ट्विटर मा हुनु पर्छतपाइँको व्यवसाय ट्विटर मा हुनु पर्छव्यापार को लागी ट्विटरकिन तपाईं ट्विटर मा हुनु पर्छ
WordPress छवि रोटेटर विजेट प्रस्तुत गर्दै
डिसे 19, 2011 मा 11: 57 AM
यो एक रोचक इन्फोग्राफिक हो, तर धेरै काटिएको र सुख्खा। तपाईंको व्यवसायमा Twitter उपस्थिति हुनुपर्छ कि छैन भनेर निर्णय गर्दा विचार गर्न धेरै कारकहरू छन्।